चाडपर्व लक्षित प्याकेजहरु बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ चाडपर्व लक्षित प्याकेजहरु बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ Arthabyapar.com || Point Media Pvt. Ltd.
चाडपर्व लक्षित प्याकेजहरु बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ
तेजेन्द्र शर्मा पौडेल, अध्यक्ष, भिलेज टुरिजम–नेपाल
० विश्वव्यापी संकटको रुपमा फैलिएको कोभिड– १९ को महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कस्तो असर परेको छ ?
कोभिड–१९ को महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पारेको जटिल अवस्थामा नेपालको पर्यटन पनि यसबाट जोगिन सकेको छैन । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ नेपाल भ्रमण बर्षको तयारी गरिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएसंगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गहिरो संकट उत्पन्न भएको छ । भ्रमण बर्षलाई मध्यनजर गर्दै सरकार र व्यवसायीहरुबाट पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य क्षेत्रहरुमा गरिएको लगानी यतिवेला जोखिममा परेको छ । पर्यटनसंग सम्बन्धित विभिन्न पेशा,व्यवसायमा आवद्ध मजदुरहरुले रोजगारी गुमाउन परेको अवस्था छ । समग्रमा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको देखिन्छ ।
० कोरोना संक्रमणको बीचमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्न सकिएला ?
अहिलेको परिस्थितीमा पहिलाकै अवस्थामा पर्यटनलाई फर्काउन त कठिन छ । तर संक्रमणबाट बच्ने सुरक्षित उपायहरु अवलम्वन गरेर पर्यटकिय गतिवीधिहरुलाई सुचारु गर्न भने सकिन्छ । सरकार, पर्यटनसंग संबन्धित निकायहरु र व्यवसायीहरुले संक्रमणकै बीच पनि सुरक्षित र सहज तरिकाले नेपालमा भ्रमण गर्न सकिन्छ भनेर विश्वव्यापी रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ । सरकारले यस अघि पर्यटकका लागि लागू गरेको परस्पर विरोधासपुर्ण मापदण्ड सरकारले सच्याईसकेको अवस्था छ । अब नेपालको एयरपोर्ट, होटल, यातायातका साधनहरु र जहाँ–जहाँ पर्यटकहरु पुग्छन, ति सबै गन्तव्यहरु पर्यटकको लागि पुर्णरुपमा सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश जान जरुरी छ । अर्को कुरा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिदै प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । अवका दिनमा आन्तरिक पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धनमा पनि सरकार र व्यवसायी दुवैले ध्यान दिन जरुरी छ ।
० दशैं,तिहार लगायतका चाडपर्वहरु नजिकिँदै छ । नेपालको धर्म, संस्कृती,चाडपर्व र ग्रामीण जीवनलाई कसरी पर्यटनसंग जोड्न सकिन्छ ?
नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो । नेपालमा जुनसुकै शहरबाट ३० मिनेटको ड्राईभमा गाउँ–गाउँ पुग्न सकिन्छ । हाम्रो ग्रामीण जनजीवन प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र साँस्कृतिक रुपमा समृद्ध छ । सांस्कृतिक विविधता भित्र पनि अनौठो एकता छ । दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वहरुको उल्लास पनि गाउँघरमै छ । यही धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरता नै पर्यटनलाई ग्रामीण जनजीवनसंग जोड्ने आधार हो । यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा चाडपर्व लक्षित प्याकेजहरु बनाएर ग्रामीण पर्यटनमा पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
० नेपालको गाउँ–गाउँसम्म पर्यटक लैजान के गर्नुपर्छ ? यहाँको संस्था भिलेज टुरिजम–नेपालले यसमा के पहल गरेको छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने, नेपालको शहरमा भन्दा गाउँमा पर्यटकहरुको लागि धेरै कुराहरु छन् । यसको अर्थ सिटी टुरिजम ठिक छैन भन्न खोजेको होईन । नेपालको सन्दर्भमा गाउँ पर्यटनको महत्व ठूलो छ भन्न खोजेको हो । बहुसंख्यक जनता गाउँमा बस्ने र गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक भएको नाताले पर्यटनको माध्ययमद्धारा ग्रामीण जनजीविकालाई माथी उकास्न सकिन्छ । विकसित मुलुकका पर्यटकहरुले अनुभव गर्दे आएको जीवन भन्दा हाम्रो गाउँले जीवन एकदम पृथक र सरल छ ।
पव, डिस्को जस्ता कुराहरुको अनुभव पर्यटकहरुले आफ्नै देशमा गरेका हुन्छन् । हाम्रो प्राथमिकता भनेको उनीहरुको अनुभव भन्दा फरक अनुभव दिनको लागि नै गाउँ पर्यटनको विकास जरुरी छ । मुख्यतः नेपालको ग्रामीण पर्यटनको बिशेषता, यसको महत्व र आवश्यकतालाई विश्वव्यापी रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ । गाउँ–गाउँमा महोत्सवहरुको आयोजना गर्न सकिन्छ । गाउँ पर्यटन विकासको लागि राज्य, पर्यटन व्यवसायी र आम नागरिकहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भुमिका खेल्न सक्यो भने गाउँ–गाउँमा पर्यटक लैजान सकिन्छ । हामीले पनि यसमा पहल गरिरहेका छौं ।
अजोडको चौथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
हरेक नेपालीको घरमा कार नभए पनि एउटा मोटरसाइकल हुनुपर्छ
टिम्सको विषयमा नेपाल पर्यटन वोर्डसंग “एस अर नो” मा कुराकानी गर्नेछु
पर्यटन वोर्ड र टानको सम्बन्ध मालिक र दासको जस्तो भयो
टानको गरिमालाई उच्च बनाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेछु
भए सर्वसम्मत, नभए चुनावी प्रक्रियावाट पनि अध्यक्ष बन्न तयार छु
विदेशी टुर अपरेटरहरुले सिधै नेपालमा ट्रेकिङ चलाउन थाले
आगामी चार वर्षमा टप टेन कम्पनीमा पर्ने लक्ष्य लिएका छौं
क्षणिक लोकप्रियताका लागी निर्णय गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्यामा परेको छ
टिम्स आवश्यक छ राखौं, आवश्यक छैन भने नराखौं